Dhamaan Dhamaan Tilmaamaha Ganacsiga Dhulka ee Imaaraadka - Sida loo sameeyo?
Xarumaha Wicitaanka Xarunta ee Dubai
Published by Shirkadda Dubai City at Waxaa laga yaabaa 8, 2019
Shirkadda Dubai City - Dhammaan wixii ku saabsan Dibadda Business Dejinta UAE
Meherado ganacsi oo dibedda ah ayaa la sameeyay ujeeddada laga leeyahay ka shaqeynta dalka dibadiisa oo laga diiwaangaliyo. Meheradda ka baxsan xeebta, dhinaca kale, waxay ku yaalaan waddan sare xaddiga cashuurta ama mid leh cashuur yar ama eber ah. Wadamada qaar, gaar ahaan kuwa ku yaal Imaaraadka Carabta Emirates, leeyihiin xeerar shirkado aad u yar iyo kharashyo maareyn dhexdhexaad ah - Tani waxay ka dhigaysaa inay jecel yihiin dadka oo raba inuu dejiyo meherado ka baxsan xeebaha.
Marka, guud ahaan marka la hadlayo, iyo sida sharciga uu qabo, ganacsigu waa inuu lahaadaa wakiil ka shaqeeya sida xiriirka ka dhexeeya dowladda iyo ganacsiga. Dad badani waxay bilaabaan meherado dibedda ah canshuurta hooseysa, xorriyadda qawaaniinta gobolka, u fududaanta sameynta macaamillada caalamiga ah, iyo maalgelinta lacageed badan ee koontooyinka dalka dibadiisa.
Xeerarka Dejinta Ganacsiga Dhulka ee UAE
Kahor intaadan dejin meheraddaada dibedda, guud ahaan inaad hadashid, waxaa lagaa rabaa inaad raacdo talaabooyinka qaarkood:
Ugu yaraan laba qof, agaasime, iyo saamile.
Ma jirto raasumaalka ugu yar ee loo baahan yahay. Dhammaan saamiyada waa in la dhejiyaa oo la bixiyaa si buuxda.
Wakiilka diiwaangashan waa in shirkadda loo magacaabo. The Aagga Aagga Aagga Imaaraadka waxay bixisaa liiska wakiilladaas.
Waxaad furan kartaa xisaab bangiga shirkadda ee gobolka.
Maaliyadaha baaritaanka ma ahan lagama maarmaan, laakiin mararka qaarkood, waa loo baahan yahay.
Canshuur 100% iyo cashuur dhaafka waajibaadka ayaa jira iyo 100% lahaanshaha shisheeye waa la oggol yahay.
Halkee ayuu ka bilaabmaa ?. Kahor intaadan aasaasin ganacsi dibadeed, waa inaad leedahay koonto bangi oo ka baxsan. Waxaad u baahan doontaa baasaboor shaqeynaya, caddeyn bangiga lix bilood ah, iyo foomamka bangiga oo shaabadaysan. Ka dib marka aad furato koonto, waad sii socon kartaa oo aad soo gudbin kartaa dukumiintiyo loogu talagalay furitaanka shirkad ka socota badda.
Kahor intaadan aasaasin ganacsi dibadeed, waxaa jira shuruudo gaar ah oo ay tahay inaad la kulanto. Tusaale ahaan, magaca shirkadda. Magacu waa inuu sharxaa waxa shirkadu ku saabsan tahay. Magaca meheradda ayaa ku dhamaanaysa mid xadidan ama la midaysan.
Hadaad magac leedahay waa inaad ka hubisaa diiwaanka si loo helo. Saamiyuhu wuxuu noqon karaa hay'ad sharci ama dad. Ma jiraan wax xaddidan oo ku saleysan jinsiyadda ama deganaanshaha. Qodobbada iyo xusuusta ururka. Waa in la gudbiyaa iyo sidoo kale dhammaan xogta diiwaangelinta saamilayda aan dadweynaha ahayn.
Dhamaan saamileyda oo uu ku jiro agaasimuhu waa inay soo gudbiyaan nuqulada baasaboorkooda shaqeynaya iyo dhammaan caddeynta ansax ah ee sharciga deganaanshaha. Kuwani waxay noqon karaan bayaanno xisaabeed oo shirkaddii asalka ahayd iyo biilasha adeegga. Waa inay sidoo kale ku daraan warqad caddeyn ah oo bangiga asalka ah.
Faa'idada Meelaynta Ganacsiga Dibadda ee UAE
Faa'iidooyin badan ayaa u leh aasaasida ganacsi meel ka durugsan. Dhinaca wanaagsanna, xagga hoose waa qaar ka mid ah:
Waxaa jira sharci ilaalin hanti oo loogu talagalay ilaalinta shirkadaha shisheeye. Waxaa intaa dheer, tan ayaa bixinaysa madal adag oo la isku halleyn karo oo loogu talagalay maalgashadayaasha marka loo eego dadka deegaanka. Difaacaani wuxuu u hayaa wakaaladaha shisheeye ee awood u siinaya inay dhisaan “gidaar sharciga ah” oo ka ilaalinaysa hantida shirkadda shirkadaheeda deyn-bixiyeyaasha.
Ganacsiyadaha dibedda waxay qiimeeyaan asturnaanta ganacsigana waxaa lagu qaban karaa si qarsoodi ah. Waxaa intaa dheer, ganacsiyada uma baahna inay soo bandhigaan diiwaanada guud ee agaasimayaasha iyo daneeyayaasha. Tani waxay u saamaxaysaa ganacsatada iyo ganacsatada ka kala yimid daafaha adduunka si ay u qabtaan ganacsiyada noocaas ah.
Ganacsiga Offshore ee UAE waa lacag la'aan; tan macnaheedu waa in dadka ganacsigu helaan lacag soo celin dhammaystiran. Tani waxay ku dhiirrigelineysaa daneeyayaal badan inay maal gashadaan gobolka, sidaa darteed, abuurista dhaqaale wanaagsan iyo faa iidooyin ganacsi oo dheeri ah. Marka laga reebo canshuur dhaafka, gobolka ayaa sidoo kale u oggolaanaya lahaanshaha ganacsiga shisheeye ee dhameystiran.
Haddii si sharci ah loo raaco, waad awoodi doontaa inaad badbaadiso hantidaada. Awoodda dibeddu waxay hubisaa inay kujirto anshax; si kastaba ha noqotee, haddii ay dhacdo xukun sharci ah, kheyraadkaagu wali waa ilaalin.
Meheradda ka baxsan xeebta uma baahna in la sameeyo aasaasi ahaan; waxay noqon kartaa qaab cajiib ah. Xitaa sidaas oo ay tahay, waxay lahaan kartaa guryaha guryaha marka ay sidaa yihiin ay ogolaadeen masuuliyiinta ay khusayso.
Meheradaha dibedda laga leeyahay ayaa ah si dhakhso leh isdiiwaangelinta iyo dejinta. Muhiim maahan maalgashadayaashu inay la kulmaan maamulka; wakiilka diiwaangashan ayaa dhammeyn kara howsha isaga oo ka keena dukumiintiyada uu maalgashuhu ku saxeexo xafiiskiisa.
Xisaabaadka bangiga ee ay fureen shirkadaha ka shaqeeya dibadaha waa kuwo rogrogmi kara isla markaana qaadi kara lacagaha badan. Tani waxay u fududaynaysaa ganacsigu inuu xawaalado lacag caalami ah iyada oo loo marayo habab kala duwan sida wareejinta siligyada ama iyada oo la adeegsanayo soo-saareyaasha lacag-bixinta internetka.
In kasta oo laga fuliyo meel ka baxsan ganacsiga UAE waa mid jajaban, waxaa jira howlo gaar ah oo aadan ka qayb qaadan karin. Kuwani waa:
Waxbarashada dadka kale.
Aasaasida shirkad ganacsi ee ka socota xeebaha waxaa fududaynaysa shuruucda iyo shuruudaha lagu dhigay meel. Wakiillada saxda ah, dukumiintiyada, iyo raasumaalka; waxaad diyaar u noqon doontaa inaad asaasto meheraddaada ganacsi ee ka baxsan xeebta. In kasta oo ay jiraan qaar Nooc ganacsi oo aan ajnabi dhisi karin, lama barbar dhigi karo fursadaha badan ee ay u furan yihiin maal-gashadayaasha shisheeye. Marka, horay u soco oo bilow meheraddaada maanta !.
Dhanka kale, haddii aad jeclaan lahayd inaad CV-ga u dirto Dubai ka Shirkadda Dubai City wuxuu ku faraxsan yahay inuu ku caawiyo.
Dubai Dhanka kale Shirkadda Magaalada, ayaa hadda bixinaysa Tilmaamaha wanaagsan ee shaqo doonka ku sugan Dubai iyo Abu Dhabi. Kooxdayada, guud ahaan ku hadlida, waxay go'aansadeen inay ku daraan macluumaadka luqad kasta anaga Dubia way soo baxday. Marka, iyada oo tan maskaxda lagu hayo, hadda waad heli kartaa hagayaal, tabaha iyo shaqaalaynta ee United Arab Emirates oo leh luqaddaada.